အာသာဖြေတော့ အာသာပြေတာပေါ့: September 2010
ကျနော်လည်း ရေးချင်နေတာ ကြာပီဗျာ ဒါပေမယ့် ဘယ်နားရေး ရမှန်း မသိတာ နဲ့ ပဲ မရေးဖြစ်တာ ဆိုပါတော့ ခု တော့ ပျင်းနေတာ နဲ့ေ၇းလိုက်ပီဗျာ.....လွန်ခဲ့ တယ့် 1999 ခုနှစ်လောက်က ပေါ့....ကျနော် က ကိုးတန်း ကျောင်းသား
ပဲ ရှိပါသေးတယ်.......အဲဒီအချိန် မှာ ကျနော့် မှာအခင်ဆုံးသူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ရှိတယ်........အောင်အောင်လို့ သာ မှတ်ထားပေး ပါဗျာ (`ဟီး ပြန်သိသွား ရင် ပြန်ကြော်ငြာလိမ့်မယ် ဗျ) သူ့ မှာ အမ တစ်ယောက်ရှိတယ်
(မမ ) လို့ ပဲ သိထား ပေး ပါ နော်......ရွာသူရွာသားအပေါင်း တို့ .......အဟီး ........မမ က တော်တော် တောင့် တောင့် ဖြောင့် ဖြောင့် ရှိတယ် ဗျ...... ဒါပေမယ့် သေချာ တာ တစ်ခု က တော့ မမ က အပျို မစစ် တော့ဘူး ဗျသူက
ယောကျာင်္းနောက်လိုက်ပြေး ဘူး ပါတယ်....... အိမ် က သိသွား လို့ ပြန်ခွဲ ထား တာ ပါ ........မမ နဲ့ အောင်အောင် နဲ့ က အသက်တော်တော်ကွာပါတယ် အောင်အောင် က ကျနော် နဲ့ ရွယ်တူ ပေါ့ မမ က တော့ အဲတုန်း က အသက်
နှစ်ဆယ့်နှစ် ရှိနေပါပီ ကဲ ဇာတ်လမ်း ကို စလိုက် ရအောင်ဗျာ ဒါ မှ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း သိမှာ ကိုး ဗျ .........
ကျနော် က မမ အိမ်မှာ စားအိမ် သောက်အိမ် ဗျ...... တစ်ခါတစ်လေ များ မမ အိပ်ခန်း ထဲ ၀င်ပီး အိပ် ချင်အိပ် နေတက်တာ ပါ .....ကျနော့် အိမ် နဲ့ က လည်း ဟိုဘက်လမ်း ဒီဘက်လမ်း ဆိုတော့ နီး တယ် ပေါ့ ဗျာ .......
အဲဒါနဲ့ တနေ့ မှာ အိမ် က နေ ပျင်း လို့ ဆို ပီး ထွက် လာ လိုက် တာ မမ တို့ အိမ် ရောက်တော့ အောင်အောင် က ဦး နဲ့ အန်တီ နဲ့ အပြင် သွား တာ လိုက်သွား တယ် ဆို တာ နဲ့ ကျနော် လည်း အောင်အောင့် အခန်း ထဲ ၀င်ပီး
ဟိုလှန် ဒီလှန် လုပ်နေတာ ပေါ့ ဗျာ ............. ခဏ နေတော့ မမ က ရေချိုး ဖို့ ထွက်လာ ရော ..........မမ အခန်း နဲ့ အောင်အောင့် အခန်း က ကပ် ရပ် ဗျ........... အောင်အောင့် အခန်း ရှေ့ က ဖြတ် သွား တာ ပေါ့
အဲဒါ နဲ့ ကျနော် လည်း လှမ်း ကြည့်နေတာ ပေါ့ ဗျာ ခဏ လေး ငါး မိနစ်လောက်ကြာတော့ .........မမ က လှမ်း ခေါ် တယ် ......တေဇ ရေ လာဦး တယ့် .....အဲဒါနဲ့ ကျနော် လည်း သွား ရော ဆို ပါတော့ ဗျာ မမ ကေ၇ချိုးခန်း
ထဲ က နေ ခေါင်း တစ်ဝက်ထုတ် ပီး အခန်း ထဲ က ဘီး သွား ယူပေး ဦး တယ့် ကျနော့် အထင်တော့ မမ အကုန် ချွတ်ပီး ဂျပန် ရေချိုးနည်း ချိုး နေတယ် ထင်ပါလေ ရော ကျနော်လည်း ဟုတ်ကဲ့ ဆို ပီး စပ်ဖြီး ဖြီး နဲ့ သွားယူပေး တာ ပေါ့ ဗျာ ....... ယူ ပြီး ပြန်လာ တော့ (တစ်ကယ် ကြီး အမှန်ပြောတာပါ ) မမ ကို စချင်စိတ် နဲ့ တံခါး ကို ဆတ် ခနဲ ဖွင့်လိုက်ပီး မမ ရော့ ဘီး လို့ ပေး လိုက်တာ ဗျာ .... ဟား. ......... အဲအချိန်မှာဗျာ မြင်လိုက် ရတာ ခု ထိ ကိုပြန်မြင်ယောင်နေတုန်း ပဲ မမ ရဲ့ ကိုယ်လုံး က အရမ်း ကို ကြည့်လို့ ကောင်းတယ် ဗျာ နို့ တွေ က လည်း လုံး နေတာ ပဲ အဲအချိန်မှာ မှန်တာ ပြောရရင် ကျနော် သွား တောင် မတိုက်တက်သေးဘူး ဗျ...... မမ ကို မြင်လိုက်တယ့် အချိန် မှာ ဘာဖြစ်မှန်း ကို မသိဘူး လူ က ကြောင်ပီး ရပ် ကြည့်နေမိတယ် ........ မမ က လည်း ဟဲ့ ကောင်လေး ဆို ပီး ဘီး ကို ယူ လိုက်တယ် ကျနော့် ကို ဖယ် ဆို ပီး တံခါး ကို တန်း ပိတ်တာပါပဲ ဗျာ .....ကျနော်လည်း အူကြောင်ကြောင်နဲ့ ပြန်ပီး အခန်း ထဲ မှာ လှဲ နေတာ ပေါ့ မမ ပုံ လေး ကို မြင်ယောင် ရင်း ပစ္စည်း က လည်း တောင် လာ တယ် ဗျာ ......ဘာဖြစ်တာ လဲ ပေါ့ ......... မာတောင်နေတာ ပဲ ဆို ပီး ကိုင် ကြည့်နေတာ တော်တော် ကြာတယ် ဗျာ ........ နောက်တော့ .ထား လိုက်ပါတော့ ဆို ပီးစာ ဖတ်နေပါလေ ရော တစ်အောင့် လောက်နေတော့ မမ က ၀င်လာ တယ် ဗျာ ထမီရင်လျှား နဲ့ .....မောင်လေး နင် ဘာလုပ်နေတာ လဲ တယ့် ပီးတော့ လည်း မပြောမဆို နဲ့ တံ ခါး ကို ဇွတ် ဖွင့် ရသလား တယ့် ..ကျနော် က လည်း မမ က လည်း လို့ ကျနော် က စ မလို့ ပါ လို့ ပြောလိုက် တယ် အေး ပါ ဘာတွေ မြင်လိုက်လဲ တယ့် အကုန်မြင်လိုက်တယ် လို့ ပြောလိုက်တယ် မမ ကရယ်တာပေါ့ ဗျာ ......... ခဏ နေတော့ မောင်လေး ရည်းစားရှိလား တယ့် ...... မရှိဘူး မမ ဆို တော့ ဟယ် ညံ့လိုက်တာ ကိုးတန်း တောင် ရောက်နေပီ ရည်းစား ထား ပါလား တယ့် ....... ကျနော် က ရည်းစား က ဘာလုပ်ရမှာ လဲ လို့ .......... ကျနော်က ...မထား ချင်ဘူး ပြောတော့ ....ထား ကြည့်တယ့် အရမ်း ကောင်းတယ် တယ့် ..ကျတော်လည်း စိတ်ဝင်စားပီး ဘယ်လို ကောင်းတာ လဲ ဆို တော့ ........မမ က လာခဲ့ တယ့် ဘယ်သူ့ မှ မပြောရင် သူ ပြ မယ်တယ့် .......အဲဒါနဲ့ ကျနော်လည်း လိုက်သွား တာ ပေါ့ ......... မမ က ကျနော့် ကို အခွေ တစ်ခွေထိုး ပြတယ် အဲကား ကို ကြည့်ထား တယ့် မမ အကျီင်္င်္င်္င်္င်္သွားဝတ်လိုက်ဦး မယ် တယ့် ကျနော် လည်း ကြည့်နေတာပေါ့ ဗျာ ........ ဇာတ်ကား က လည်း ......အမေရိကန်0ကား ဗျာ ......အရမ်း ကို ကြမ်း တာ ကျနော် လည်း ပထမတော့ မျက်နှာ ပူ တာ ပေါ့ နောက် တော့ လည်း အိုးဘယ်သူ မှ မရှိပါဘူး ဆို ပီး အေး ဆေး ထိုင်ကြည့်နေတာ .......ညီလေး ကို ထောင်နေတာ ပဲ ........စကား မစပ် ကျနော့် ညီလေး က အချိန် မှာ ငါးလက်မလောက် ရှိမယ်ဗျ............ တော်တော် ကို ထောင်နေတာ တစစ် စစ် နဲ့ ဗျာ ဘယ်လို မှန်း လည်း မသိဘူး ....
ခဏနေတော့ မမ ပြန်ရောက်လာ ပီး ကျနော့် ဘေး နား မှာ ထိုင်တယ် ......ကျနော် တို့ ကြမ်းပြင်မှာ ထိုင် ပီး ကြည့်တာဆို တော့ မမ က ကျနော့် ပေါင် ပေါ် လက်တင်ထား တာ ပေါ့ ဗျာ .....ပီး တော့ ကျနော် က လည်း ဘောင်းဘီ တို နဲ့ အတွင်းခံ က လည်း မ၀တ်ထား ဘူး ဗျာ အဲကျတော့ ဘာပြောကောင်းမလဲ မြင်ယောင် ကြည့်ဗျာ ဟီး ဟီး .........မမ က တွေ့  လား တယ့် ......ဟုတ်မမ တွေ့ တယ် လို့ ကျနော် ဆက် မကြည့်ချင်တော့ဘူး လို့ ဆို တော့ ဘာဖြစ်လို့ လဲ တယ့် ...... ကျနော် မနေတက်တော့ဘူး လို့ ပြောတော့ ဘာကို မနေတက်တာ လဲ တယ့် ကျနော် က မမ လည်း ကြည့်ဦးလေ လို့ ဒီမှာ ဖြစ်နေတာ ဘာဖြစ်မှန်း လည်း မသိဘူး လို့ ပြောတော့ ပြ စမ်း တယ့်
အင်း မမလုပ်ပေး မယ် တယ့် ......ပီးတော့ ကျနော့် ကို သွား တိုက်နည်း သင်ပေး တော့ တာ ပဲ ခဏ လေး လုပ်ပေး လိုက်တာ ကျနော့် မှာ ညီလေး က မျက်ရည်တွေ ကို ရွှဲ လို့ ....... မမက ကောင်းလား တယ့် ....အရမ်း ကောင်းတယ်လို့ ပြောလိုက်တော့ မမ က အဲဒါဂွင်းတိုက်တယ် ခေါ် တယ် တယ့် မလုပ်ဘူးဘူး လား တယ့် ကျနော် က မလုပ်ဘူး ဘူး လို့ ....ဒါ ပထမဆုံး ပဲ ဆို တော့ ....လာ ဆို ပီး ကျနော့် ကို သူ့ အခန်း ထဲ ခေါ် သွား ပါလေရောပီး တော့ .......... ကျနော့် ကို တစ်ကိုယ် လုံး ချွတ်ခိုင်း တယ် .......နောက်ပီး ကုတင်ပေါ် မှာ အိပ် ခိုင်း ရော ကျနော် က အိပ်တာပေါ့ အဲဒါ မမ က ကျနော့် ကို လာပီး ပွတ်ပေး နေတာ ပေါ့ ဗျာ စကား တွေ လည်း ပြောပြတာ ပေါ့ .........အဲဒီ မှာ ညီလေး က ပြန်ပီး မာ လာ တယ် ဗျာ ......မမ က သူ့ နို့ ကို ပေး ကိုင် တယ် ကျနော် လည်း ကိုင် ကြည့်တာ အိနေတာ ပဲ ဗျာ ဘယ်လို ပြောရမှန်း မသိတယ့် အရသာ ပေါ့ ......ကျနော်လည်း ဟိုကိုင် ဒီကိုင် နဲ့ ...ပေါ့ မမ က သင်ပေး တယ် ခေါင်းလေး ကို ပွတ်ပေး တယ့် ............သူခိုင်း တယ့် အတိုင်း လုပ်ပေး တော့ သူ က အသံလေး ထွက်လာ တယ် ဗျာ အဲဒါနဲ့ ကျနော် လည်း ပွတ်တာ ပေါ့ ........မမ က နို့ ကို လည်း စို့ ခိုင်းတယ် ......သေချာ ကို သင်ပေး တာ ပေါ့ .......ကုန်ကုန်ပြောရရင် ဗျာ ကျနော့် ရဲ့ လက်ဦး ဆရာမြည်ထိုက်စွာ ပေါ့ အကုန် သင်ပေး တယ် ....... အဲနေ့ က မမနဲ့ ကျနော် လင်မယားလို ကိုနေဖြစ်လိုက်ပါတယ်
မမ က ကျနော့် ကို တက်ပီး လုပ်ခိုင်း တယ့် အချိန် က တော့ ဒူး ကို တုန် တယ့် အချိန်ပါပဲ ဗျာ ......ညီလေး က လည်း အဲလို ကို စ တွေ့ ဘူး လို့ လား မသိဘူး ....... ပြန်ပြန် အိပ် သွား တယ် အဲ ဒါကို မမ က ပြန် လုပ်ပေး လိုက် တာ နဲ့ နိုး လာ ရော အဟီး ......... သူ ခိုင်း တယ့် အတိုင်း ကျနော် လည်း ၀င်ပီး လုပ် ပေး တယ့် အချိန်မှာ ဘယ်လောက်မှတောင် မကြာပါဘူး ဗျာ .........အရမ်း ကို အိစက်ညက်ညောတယ့် အရသာ တစ်ခု ကို ခံ စားရပီး တော့ ......ကျနော့် ရဲ့ ညီလေး က နောက် တစ်ခါ ထပ်ပီး မျက်ရည်တွေထွက်လာ တော့ တာ ပဲ မမ က တော့ ကောင်းလား တယ့် ကောင်းတယ် ဆို တော့ အောင်အောင် မသိစေ နဲ့ တယ့် .....နောက် ကျရင် မမ ပြောတယ့် အချိန် ကျရင် လုပ်ဦး မလား တယ့် ကျနော် က လည်း မငြင်း ပါဘူး လုပ်မယ်ပေါ့ .....အဲဒါနဲ့ မမ နဲ့ ကျနော် တော်တော်ကြာကြာကို နေဖြစ် လိုက်ပါတယ် ခု တော့ မမ လည်း အိမ်ထောင်ကျသွား တာ ကြာပါပီ......သားလေး တောင်မွေး နေပီ.......ကျနော် နဲ့ တူလား လို့ သွား ကြည့်သေး တယ် ဟီး .......မတူပါဘူးဗျာ......နောက်တာပါ ........ မမက ဆေး ထိုး ထား တယ် ဗျ သူ သင်ပေးလို့ လည်းကျနော် တော်တော်ကို ထူးချွန်သွား တယ် ပြောရမယ်................ခု တော့ မမ အိမ် ကို သွား လည်တိုင်း မမ သား လေး ကို ထိန်း ပေး ရင်း နဲ့ ကျနော် က မောင်တစ်ယောက်ရဲ့ တာဝန် ကို ကျေပြွန်အောင် ထမ်းရွက်နေပါတယ် ဗျာ .......
ကောင်းရဲ့ လား မသိဘူး နော်.....ကျနော် လည်းေ၇းတက်သလို ရေးလိုက်တာ ၀တ္တုလည်း ရေးမလို့ ပါ ကိုယ်တွေ့ နဲ့ ...စိတ်ကူးနဲ့ ပေါ့ ......မကောင်းရင် လည်း ဝေဖန်ပေး နော်....ပြင်သင့်သာ ပြင်ရအောင်ပါ
ကျေးဇူး တင်ပါတယ်ဗျာ အားလုံး ကို
ကျနော် မမ နဲ့ ဖြစ်ပီး တယ့် နောက်ပိုင်း မှာ .....တော်တော်လေး ကို ဆာလောင်မွတ်သိပ် တက်နေပီပေါ့ ဗျာ.....
အဲဒါနဲ့ ဆယ်တန်း လည်း ပြီးေ၇ာ ကောင်မလေး ထား မဟဲ့ဆို ပီး ....... ရှာပါလေ ရော........တကယ်လိုချင်လို့ ရှာတယ့် အချိန်ကျတော့
မတွေ့ဘူး ဗျ.......တော်တော်ကို ရှာရခက်နေတယ်........အဲဒါနဲ့ မထူး ပါဘူး လေ ဆို ပီး ပြောမနာဆို မနာသူငယ်ချင်း ထဲ က စဉ်းစား ရတာ ပေါ့
ကို လို ချင်တာ က အချစ်မဟုတ်ဘူး လေ..................ဟဲ ဟဲ ........... သိတယ် မဟုတ်လား.................. အဲဒါနဲ့ ဗျာ ကျနော့် ကို အရမ်း ကို အလိုလိုက်တယ့် သူငယ်ချင်းလေး တစ်ယောက်ကို သွား မြင်ပါလေ ရော သူ လေး က ( ပ ပ ) လို့ ပဲ ထား လိုက်ပါတော့ ဗျာ .......... ကျနော်လည်း ပပ ကို ပထမဆုံး ရည်းစား အနေနဲ့ ရွေး ချယ် လိုက်ပါတယ်.......... တိုတို ပြောရရင်တော့ သူ နဲ့ ကျနော် နဲ့ မကြာခင် မှာ ချစ်သူ
ဖြစ်သွား ပါတယ် ဗျာ ...... သူ က ရုပ်ရည် က တော့ သိပ် အချော စား ကြီး မဟုတ်ဘူး ဗျ ဒါပေမယ့် ထူးရှယ် တစ်ခု သူ များ နဲ့ မတူ အောင် ရှိတာ က သူ့  ရဲ့ နောက်ပိုင်း အလှပေါ့ ဗျာ ......... ရှင်းရှင်း ပြောပြ ရရင်တော့ သူ့ တင် တွေ က .......တော်တော် ကို လှတာ ခင်ဗျာ ..ကိုယ်လုံးကိုယ် ပေါက် ကို က လှတာ ပေါ့ .......... ခါးလေး သေး ပီး တင် နေရာမှာ ကား သွား ချက်များ ကြည့်နေရင်း နဲ့ ကို ........ဟာကွာဟာကွာ ဖြစ်နေရတယ်
တင်တင်အောင် ဆိုပါတော့ ဟီး ................အဲဒါနဲ့ သူ နဲ့ ကျနော် ချစ်သူ ဖြစ်သွား ကြတော့ သူ က အမြဲ ကို ချိန်း တယ် ခင်ဗျ......ကျနော် က လည်း အကြံ နဲ့ သူ ဆို တော့ ချိန်း တိုင်း လည်း မငြင်း ရှာပါဘူး အား နာ ရသကိုး ဗျ ဟီး ..........ကျနော် တို့ မြို့ က သိပ် လည်း မကြီး တော့ သွား စရာ က လည်း သိပ် မရှိဘူး ပေါ့ ဗျာ ခဏ ခဏ ချိန်း တော့ နေရာ တွေ လည်း ထပ် နေပီ မသွား ရသေး တာ ဆို လို့ တည်းခိုခန်း ပဲ ရှိတော့ တယ် ဟီး ဟီး သိပ် လည်း မကြိုက် ရှာတော့ ........... တနေ့ သူ့ ကိုတွေ့ တော့ ပြောရတာ ပေါ့ ဒီတစ်ခါတော့ ဘယ်မှ သွား စရာမရှိဘူး လို့ သွား ချင်တယ် ဆို ရင်တော့ ........ ဟိုတယ် ပဲ ရှိတော့ တယ် လို့ ပြောလိုက်တော့ သူ က ကို နော် တယ့် အကြံ ကို က မကောင်းတာ က အရင် တယ့်
အော် မဟုတ်ပါဘူး .......ချစ် ရယ်ဘာညာပေါ့ ......... အဲ ဒါနဲ့ ရောက်သွား တာ ပေါ့ ဗျာ ကိုယ့်မြို့နား က မြို့သေး လေး တစ်ခု က ဟိုတယ်အသေးစား လေး ကို သွား တာ ပေါ့ ............ကိုယ့် မြို့ မှာ ဆို ခွင်တွေ ပိတ်ကုန် မယ်လေ သိတယ် မဟုတ်လား .....ဟဲ ဟဲ
ဟိုတယ် ရောက်တော့ သူနဲ့ ထမင်း အတူ မှာ စား ပီး တော့ ကျနော် က အရက် နဲ နဲ သောက်မယ် လို့ ပြောတော့ သူ က မသောက်နဲ့ တယ့် အတင်း ပြောတော့ သူ လည်း သောက်မယ် တယ့် ကဲ ကျနော် ဘယ်လို လုပ် ရမလဲ .......... သူ သောက်ချင်တယ့် ဆန္ဒ ကို မျက်ကွယ် မပြု ရက်တာ နဲ့ ပဲ .... သူ့  ကို တစ်ပတ်လောက်တိုက် လိုက် တာပေါ့ ဗျာ ..... ဟဲ ဟဲ မှန်တယ် မဟုတ်လား ................သူ က သောက်ပီး တော့ မှ ဘယ်တုန်း က လုပ်ချင်နေမှန်း ကို မသိတာ ဗျာ .....ကျနော့် ကို များ မှန်းမှန်း ပီး တော့ ....... ညီမလေး ကို လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်ပေး နေဘူး လား မသိ......အတင်း ကို နမ်း တော့ တာပဲ .........အဲ အချိန် မရောက်ခင် ထိ သူနဲ့ ကျနော် နဲ့ က ........... သူ့  ဟာ လေး ကိုယ်ပွတ် ကိုယ့်ဟာလေး သူ သွား တိုက်ပေး အဲလို ထိနေဖြစ်ထား တာ ပေါ့ ဗျာ ......ကဲ ဆက်လိုက်ဦး မယ် နော်...........
သူ က စ ပီး နမ်း တာ ဗျာ အကု န် ပဲ ကျနော် လည်း စဉ်းစား တာ ပေါ့ ......နမ်းခံ ရင်း နဲ့ ငါ အေးဆေး လေး လုပ်မယ်ဆို ပီး အရွလေး ပေါ့ ဗျာ ဖီးလ် လည်း ယူမယ်ပေါ့ .........သဘောပေါက်တယ် မဟုတ်လား ကျနော် ပြောတာ .....ဟဲ ဟဲ ...အဲဒါနဲ့ သူ့  ကို နမ်း ရင်း နဲ့ အကျီင်္င်္င်္င်္င်္လေး ကို ချွတ်ခိုင်း လိုက်တယ် ဗျာ ....... ချစ်လို့ အတူတူ မနေခင် ရေချိုး တာ နှစ်ယောက်လုံး အတွက် ကျန်းမာရေး ပါ ကောင်းစေတယ်လို့ ပြောတော့ သူ က အဲဒါ ဆို ချိုး မယ်လေ တယ့် .. (ဟီး ဆိုင်လား မဆိုင် လား တော့ မသိဘူး ) ကျနော် က ရေ ချိုး ပေး ရတာ ကို ဖီးလ်လာတယ် ဗျ ဒါ က
ကြော်ငြာ ပါ ....ဟဲ ဟဲ ...... သူ နဲ့ ကျနော် ရေ ၀င်ချိုး တော့ ကျနော် က သူ့ ကို ဆပ် ပြာ တိုက်ပေး တာ ပေါ့ ဗျာ .... သူ မှာ လုံး ၀ ကို မနေနိင်အောင်ဖြစ်နေတာ .... အရက်တန်ခိုး နဲ့ တူ ပါ တယ် ဗျာ ...........နှစ်ယောက်လုံး က လည်း ငယ်ကြတော့ ဘာမှ ကို ပြောစရာမလို အောင်ကို ဖြစ်နေကြတာ များ ........ကျနော့် ညီလေး ဆို လည်း မတ် ခနဲ နေတာ ........ သူ က လည်း ဆော့ နေတာ ပေါ့ ညီလေး နဲ့ .......ကျနော်လည်း မနေနိုင်တာ နဲ့ သူ့  ကို ပြန်ခေါ် ပီး ကုတင် ပေါ် လည်း ရောက်ရော သူ့ ရဲ့ ရွှေရင်နှစ်မွှာ ကို အရင် နမ်း တော့ တာ ပါပဲ ....စို့ လို့ လည်း ကောင်း သူ က လည်း အသံ ထွက်တော့ ဖီး လ် ကို မြောက် နေတာ ပဲ .......သူ့  နို့ လေး တွေ က သိပ် တော့ မကြီး ဘူး ဗျ ဒါပေမယ့် အပျို နို့ လေး ဆို တော့ တင်း နေပီး ကျနော့် ကြောင့် လက်ယောင် က လည်း လိုက်ထား တော့ တင်း ပီး ကိုင် လို့ တအားကောင်းတာဗျ.......ကျနော် လည်း စို့ ကောင်းကောင်း နဲ့ စို့ နေတာ သူ က လည်း ခံ ကောင်းကောင်းနဲ့ ခံ နေတယ် ထင်ပါရဲ့ ဗျာ ....
အဲ ဒါ နဲ့ လက် လေး နဲ့ သူ့  ညီမလေး ကို ကလိပေး တော့ အရည် တွေ တော်တော် ကို ထွက်နေပီ ဗျ ကျနော် လည်း စလို့ ကောင်း ပီ ဆိုပီး
ညီလေး နဲ့ ညီမလေး ကို တေ့ ပေး လိုက်ပါလေ ရော သူ က တော့ အောက် ကနေ တစ်လူးလူး တစ်လွန့် လွန့် ပေါ့ ဗျာ လိုချင်နေတာ ပြောပါတယ် ...........စစ ထည့်တယ့် အချိန်မှာ မ၀င်ဘူး ဗျ ကျနော် က လည်း သိပ်မကျွမ်း ကျင်သေး တယ့် အခါ ဆို တော့ နဲနဲ တော့ အခက်ခဲ ဖြစ်နေတာ ပေါ့ ....... သုံးလေး ခါ လောက် ကြိုးစား ပီး တော့ မှ ညီလေး က ခေါင်း ညိမ့် ပီး ၀င်သွား တော့ တယ် ဟဲ ဟဲ ..... အသာလေး ပေါ့ ဗျာ
ခပ်ကျပ်ကျပ် ဖြစ်နေတယ့် တွင်းလေး က .....တော်တော် ကို ကောင်းတာ ဗျာ .......သူ က လည်း အသံလေး ထွက် ကျနော် က လည်း ဖီးလ်လေး တက် ဆို တော့ ...... သံပြိုင် ကို ဆွဲ နေတာ ဟီး အသံတွေ ပြောပါတယ် ကုတင် က လည်း ၀င်ပီး အော်သေး တယ် ဟီးဟီး
သူ နဲ့ ကျနော် လည်း မကြာပါဘူး တစ်မျိုးတောင် မပြောင်း လိုက် ရဘူး ညီလေး က ငို ပါ လေ ရော သူ က တော့ အင်းအင်း အဲ အဲ ပေါ့
အဲ အချိန်မှာ ကျနော်က ပီး သွား တော့ ရေ သွား ဆေး တယ် ဗျာ ပြန်လာ တော့ သူ က စောင်လေး ခြုံ ပီး ကျနော့် ကို လိုက်ကြည့်နေတယ် ခု မှ ရှက်တယ် ထင်ပါရဲ့ .........ကျနော် လည်း သူ မရှက်အောင်စကား တွေလျှောက်ပြောတာပေါ့ ...........အဲဒါ နဲ့ သူ့  ကို ပြောနေရင်း လက်က ဟိုကိုင် ဒီကိုင် ဆို တော့ ညီလေး က ပြန် ပီး မတ်လာ ပါလေေ၇ာ ...... အဲဒါနဲ့ သူ့ ကို ပေး ကိုင် တာ ပေါ့ ......သူ က ညီလေး ကို သေချာ ကိုင်ပေး ပါ တယ် ယုယုယယလေး ပေါ့ ......ပီးတော့ ကျနော့် ကို သူ့  ကို ဘယ်တော့ မှ မခွဲ ရဘူး နော် တယ့် သေချာ မေး တယ် ကျနော် လည်း သေချာ ဖြေ ပါ တယ် အင်းပါ လို့ ..........ဒီလောက် အလို လိုက်တယ့် သူလေး ကို ဘယ်လို ခွဲ ရက်မှာလဲ ပေါ့ ခြွေတာ ခြွေ တာ .......သူ က ကျနော့် ကို တော်တော်ချစ် တာ ဗျာ ......... အဲ ဒါနဲ့ ကျနော် က နောက်တစ်ခါ လောက်လို့ ထပ် တောင်း တာ ပေါ့ သူ က လည်း လိုက်လျော ပါ တယ် ......အဲလို နဲ့ ပဲ ကျနော် တို့ ဟိုတယ် က ပြန်ထွက်လာ တော့ ညနေ လေး နာရီလောက်ထိုးနေပီပေါ့ ဗျာ..........သူတော့ မသိဘူး ကျနော် က တော့ ညီလေး နှစ်ခါတောင် ငိုခိုင်း လိုက်တော့ နဲ နဲ တောင် အောင့် နေတယ် ဗျာ ...... သူ လည်း ကွ နေပုံ ပဲ စစချင်း မှာ ဆို တော့ သူ လည်း ခံစား ရမှာ ပါ .......အဲတုန်း က တော့ မသိဘူး ပေါ့ ဗျာ ......... ခု မှ ပြန်မြင် ယောင်မိတာ ဆိုင်ကယ် ပေါ် တက်တာ များ ဖြေးဖြေး လေး တက် တာ ဟီး ဟီး ............အဲသလို နဲ့ ပဲ သူ နဲ့ ကျနော် ဟာ သွား စရာတွေထပ် ရင် နောက် မသွား တော့ ပဲ နေတက်ပေမယ့် ဟိုတယ် ကို တော့ ခြေလှမ်း ညီညီ နဲ့ ကို အတူ ခဏခဏ သွား ဖြစ်နေကြပါတယ် ........... ပျော်စရာအချိန်တွေ ပေါ့ ဗျာ ........ အဲလို နဲ့ တနေ့ ကျတော့ ကျနော် နဲ့ သူ့  ရဲ့ ဘ၀ ထဲ ကို ........... ထပ်ဝင်လာ မယ့် နောက် တစ်ယောက် ကို တွေ့ မိတော့ တာ ပါပဲ ဗျာ အဲအကြောင်းကို တော့ ကျနော်နောက် မှ ရေး ပါမယ်နော် ......... ကိုသလွန် နဲ့ ချိန်း ထား တာ ရှိလို့ ပါသွား လိုက်ပါဦး မယ် ခင်ဗျာ ဝေဖန် အကြံ ပေး ကြပါ နော်
ကဲ......လာပါပီ ဗျာ မနေ့ က မလာဖြစ်တာ တောင်းပန်ပါတယ်......နော် စောင့်မျှော်နေတယ့် သူ များ ကို ပြောပါတယ် အဟီး
သူနဲ့ ကျတော်နဲ့  ဘ၀ ထဲ ကို ထပ် ၀င်လာ တယ့် သူလေးက တော့ (စုစု) လို့ပဲ မှတ်ထားပေးပါ ဗျာ ......... သူ့နာမည်က စုစု တယ့် ကျနော် တို့ မြို့မှာ အဝေးသင် လာတက်တာပေါ့ ဗျာ ... သူ က ရုပ်လည်း ချော တယ်
ဘော်ဒီလည်း လှတယ် ပြောစရာကို မရှိတယ့် သူလေး ပေါ့ ဒါပေမယ့်တစ်ခု တော့ ရှိတယ် သူ က အညှာ လွယ်တယ် လို့ နာမည် ကြီး ပါတယ် ခင်ဗျာ .... ကျနော့် တို့ မြို့ ရဲ့ ကျားကလေး တော်တော် များ များ သိတယ့် သူ ပေါ့ တနေ့ တစ်ယောက်နဲ့ ပါ သွား နေကြပါ ...... အဲဒါ နဲ့ သူ နဲ့ ကျနော် နဲ့ ပတ်သက် ရမယ့် အချိန်တစ်ခု ကို ရောက်လာပါတယ်...... ကျနော် က လည်း အားနေတယ့် တစ်ရက် စားစရာလေး က လည်း မအားတော့ ပျင်း နေတာ ပေ့ါ ဗျာ အဲဒီ မှာ သူငယ်ချင်း က လာ ခေါ် ပါတယ် သူ .......ကျနော် တို့ မြို့ နဲ့ နဲ နဲ လှမ်း တယ့် နေရာတစ်ခု က ချောင်း လေး ကို သွားမလို့ တယ့် အဲမှာ ဘန်ဂလို လေး တွေ လည်း ရှိတယ် သူ့ ကောင်မလေး က သူ့ ကို ပေး မယ် ဆို လို့ သွား မယ်ပေါ့ သူ က ..အဲဒါ လိုက်ခဲ့ ပေးပါတယ် .... ဟ ငါ ဘာလို့ လိုက်ပေး ရမှာ လဲ မင်း ကလည်း ဆို တော့ သူ့  ကောင်မလေး သူငယ်ချင်း တစ်ယောက်လဲ ပါမယ် တယ့် သူ က လိုက်ချင်လို့ တယ့် ငါ လည်း မခေါ် နဲ့ ပြောတာ ကောင်မလေး က ခေါ် လိုက်တော့ ငါ ရွာလည် နေတယ် တယ့် မင်း ကူညီပေး ပါ တယ့် အဲဒါနဲ့ ကျနော် လည်း တကယ်ကြီး ကို ကူညီ မလို့ပါ ပဲ ချောလား မချော လား လည်း မသိ လိုက်သွား ပေး လိုက်တယ် ဗျာ အဲမှာ သူတို့ နေတယ့် အဆောင် ကို သွား ခေါ် တာ ပေါ့ ကျနော် က ကျနော့် ဆိုင်ကယ် နဲ့ တစ်စီး ဒီကောင် က တစ်စီး ကောင်မလေး တစ်ယောက်စီကို တင်ပီး လစ် ကြတာ ပေါ့ ..... အဲ မှာ စတွေ့  တာ ပေါ့ ဗျာ သူ နဲ့ ကျနော် သူ က စုစု မှန်း လည်း သိပါ တယ် ကျနော်က သိနေတာ ပေါ့ ...... သူ က နာမည် လည်း ထွက် နေတာ ကိုးကျနော် က လည်း .......ဇယား ရှုပ်နေမှာဆိုး လို့ တာ ...အေးဆေး နေတာ ပတ်သက်ချင်တာ တော့ အမှန်ပါပဲ ... ကျနော် တို့ ဆိုင် ကယ် နဲ့ ထွက် တော့ သူ က ဘောင်းဘီ အတို နဲ့ ဗျာ နောက် က ခွ ထိုင် တာ ကျနော့် ခါး ကို ဖက်ထား တာ ပေါ့ ...ကျနော်က လည်း ဆိုင်ကယ် ကို ပထမတော့ အေးဆေး မောင်းနေပါသေး တယ် နောက် တော့ မရတော့ဘူး ကလိ မှ ဖြစ်မယ် ဆို ပီး ..... ဆိုင်ကယ်ကို လီဗာ ပုတ် လိုက် ...... ဘရိတ်ဆွဲလိုက် နဲ့ သူ့ ကို မြင်းစီး ခိုင်း လိုက်တာပေါ့ သူ က အဲ မှာ ကျနော့် ကို ပြောတယ် ဗျာ ...... ဟင်းနော် တော်တော် အသားယူ တယ့် ယောကျာင်္းလေး တွေ တယ့် ...... ဟိုက်ကျနော် တော့ အရှက် ကွဲပါပီ ပေါ့ ... အဲဒါ နဲ့ ကျနော် လည်း ပုံမှန်လေး ပြန်မောင်း ပီး တောင်းပန်တာပေါ့ မဟုတ်ပါဘူး ဗျာ ကျနော့်က ဆိုင်ကယ် မောင်း ရင် အဲလို ဆော့ တက်လို့ပါလို့ ပြောရတာ ပေါ့ အဟီး ...သူ က ဘာမှ မပြောပဲ နဲ့ ကျနော့ ပခုံးပေါ် တောင် ခေါင်း မှီလိုက်သေး တယ် ....... ပီး တော့ ပိုပီး တင်းတင်း ဖက်ထား တယ် ဗျာ ကြိုက်လား တယ့် အဲလို ...... ကျနော် က လည်း ကြိုက်တယ် လို့ လူ ကို အရင် မြင် ကတည်း က ကြိုက်နေတာပေါ့ ဘာညာ ဆို ပီး မောင်း ရင်းနဲ့ ဖက်ထား တယ့် လက်လေး ကို ကိုင် ပီး ခြွေ တာ ပေါ့ ဗျာ ....သူ က ရီ ပါလေ ရော တကယ်ရောဟုတ်ရဲ့လားပေါ့ ... ရည်းစား မရှိဘူး လား တယ့်
မရှိဘူးလို့ ကျနော် က ရည်းစားကို မထား ချင်လို့ မထားဘူး လို့ ညာပြောလိုက်တယ် ဘာလို့ မထားချင်တာ လဲ တယ့် ကျနော် က ချုပ်ချယ် တာ ကို မကြိုက်ဘူး လို့ အဲဒါကြောင့် မထား တာ ပါဆို တော့ သူ က တစ်မျိုး ပဲ တယ့်
ကျနော် တို့ အဲဒီချောင်းလေး ကို ရောက်တော့ သူငယ်ချင်း က ဂွင်ဆင်ပါလေေ၇ာ မင်း တို့ အထက် ဘက် တက်မလား အောက်ဘက် ဆင်း မလား တယ့် ချောင်းလေး က အရမ်း သာယာတယ် ဗျာ လူ လည်း ရှင်းတယ် ပွဲတော် ချိန် မဟုတ်ရင်ပေါ့ .... အဲဒါ နဲ့ ကျနော်က တစ်ခုခု စားဦး လေ လို့ ပီး မှ လမ်း ခွဲ မယ် လို့ ပြောရော သွား စား ကြတာပေါ့ ဗျာ ကျနော်လည်း သူငယ်ချင်း ကို ငါ သဘောကျနေပီ လို့ ဖန် လိုက်တော့မယ် ပြောတော့ လုပ်တယ့် မင်း နဲ့ ကေ သွား ရင် ငါ လည်း အေးဆေး ပဲ တယ့် .အဲဒါ နဲ့ မင်း သွား နှပ် နေမှာ မဟုတ်လား ဆိုတော့ ဟုတ်တယ် တယ့် မင်းတို့ သွား တာ နဲ့ ငါ ဘန်ဂလို သွားမယ် လို့ ပြောထား ပီး သား တယ့် အဲဒါဆို မင်း ..အရက် နဲနဲ ကစ်လိုက်ကွာ နေရတာ လည်း ပိုကောင်းတယ် ဆို တော့ ကစ် မယ် ဆိုပဲ ငတိ က မငြင်း ရှာဘူး ..ဟီး ဟီး ...ကျနော့် သူငယ်ချင်းပါဆို အားနာတက်တယ်လေ မငြင်း ဘူး ...ဟီး .....သူနဲ့ ကျနော် လည်း ပြားကြီး တစ်ပြား မှာ လိုက်ပီး တော့ ထမင်း စား ရင်းသောက်မယ် လုပ်တော့ ကောင်မလေး တွေ က သူတို့ လည်း သောက်ဖူး အောင် သောက်ကြည့်မယ်တယ့် ကျနော်က တော့ ပျော်ပျော် ပဲ လုပ်ပေါ့ သောက်ပေါ့ ......အဲဒါနဲ့ ကျနော် ကိုယ် တိုင် မာကာ လုပ်ပေး လိုက်ပီး တိုက်လိုက်တယ် စုစု က အေးဆေး လေး သောက်လိုက်တယ် ဗျာ .......သူငယ်ချင်း ကောင်မလေး က လည်း စွတ်က နဲ ပဲ အရှိန် တင် လိုက်တယ် ထင်တယ် ရဲဆေး ပေါ့ ဟီး ဟီး ..ကျနော် ကတောင် နောက်နေသေး တယ် .... ထား ပါ တော့ ....စား ပီး သောက်ပီး တော့ သူ တို့ ထက် အရင် ကျနော် က စုစု ကို လက်ဆွဲခေါ် ပီး လစ် ပါလေ ရော စုစု က မလှမ်း မကမ်း ရောက်တော့ ..... တေဇ တယ့် သူတို့ ဘန်ဂလို သွား မှာ မဟုတ်လား တယ့် ကျနော်လည်း မညာချင်ဘူးလေ ဟုတ်တယ် လို့ ပြောလိုက်တော့ သိသား ပဲ တယ့် ကောင်မ ရွနေတာ တယ့် ဟီး မနာလို ဖြစ်နေသလားပေါ့ ကျနော်က လည်း စ လိုက်တယ် သူ က မဖြစ်ပါဘူး တယ့်ဘာသွား လုပ် မလဲ တယ့် ဘန်ဂလို ကို ....... အော် တနေကုန် နေရင် ရေထဲ မှာ ချမ်း နေမှာေ ပါ့ လို့ ...ပီးတော့ အဲ အချိန် က ဆောင်းတွင်း နိုဝင်ဘာလလေ အေးတယ်ပေါ့ ဗျာ ရေ ကလည်း အေးစက်နေတာ ပေါ့ .... အဲကျတော့ သူ ကျတော့ ဘယ်လို လုပ်မလဲ တယ့် မစောင့် ပဲ ပြန်မှ ထင်တယ် တယ့် ကျနော် တော့ ဒုက္ခပဲ လို့ တွေး မိတယ် ဗျာ ကျနော် လည်း ရအောင်ပြောမယ် ဆို ပီး မပြန်ပါနဲ့ ပေါ့ လာ ရေဆော့ မယ် ဆို ပီး ရေထဲ ခေါ် သွား တယ်အဲအချိန်မှာ သူ နဲ့ ကျနော် က ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ချစ်သူ သာ မဟုတ်တယ် လက်တွေ ကိုင် ခါးတွေ ဖက် .နမ်းလိုနမ်း နဲ့ ပေ့ါ ဗျာ .သူ က လည်း အေးဆေး ပဲ နဲ နဲ တော့ သွက်နေတာ အမှန်ပဲ ကျနော်က တော့ မသိမသာလေး ပေါ့ သူ နဲ့ ရေထဲ မှာ တစ်နာရီကျော်ကျော် လောက်နေတော့ သူ တော်တော် အေး နေပီ ဗျ ကျနော် တောင် အေး နေတာ ဆို တော့ သူ ဆို ပြောမနေ နဲ့ တော့ ...အဲဒါ နဲ့ ကျနော် လည်း အရမ်း အေး နေပီ လို့ မဖြစ်သေးဘူး ဆို ပီး သူ့ ကို နောက် ထပ် အရက် တစ်ပတ် ထပ် တိုက် လိုက်တယ် ပီး တော့ ဘန်ဂလို သွား မယ်လို့ ဖျားနေမယ် ဆိုတော့ ဟင်အင်း မသွား ဘူး တယ့် ပြန်မယ် တယ့် ဟာ မပြန်ပါနဲ့ ကွာ စု က လည်း ..... ဒီ လို ရေ စို ကြီး နဲ့ပြန်မယ် ဆို သူများမြင် လည်း မကောင်းဘူး ပီး တော့ လမ်း မှာလေတိုက်ခံ ထိ ရင် ဖျားနေမယ် လို့ ပြောတော့ သူ က မရဘူးတယ့် ဘာမှ မဆိုင်ပဲ ဘန်ဂလို ထဲ နှစ်ယောက်ထဲ ရှိတာ ထက် ပြန်တာ က ပို ကောင်းတယ် တယ့် .ကျနော် လည်း သူဖောက်တယ့် လမ်း မှ ဆက် မလျှောက် ရင် ဘယ်ဖြစ် မလဲ ...တန်း ပီး ဘာညာ ခြွေ ပလိုက်တာ ပေါ့ ဗျာ ...... အဲဒါနဲ့ သူ လည်း လိုက်လာ ပါလေ ရော အထဲ ရောက်တော့ သူ နဲ့ ကျနော် အခန်း ထဲ မှာ ထိုင် နေတာပေါ့ ပီး တော့ ကျနော်က ..... စု အ၀တ်အစား တွေ ချွတ်လေ.......... ဘာလုပ်မလို့ လဲ ........... အော် အအေး ပတ်နေမှာဆိုးလို့ပါကွာ....စောင်ခြုံပီး ချွတ် လိုက် ပီး ရင် ကို့ ကို ပေး ကိုလှမ်းပေးထားမယ် ဆို တော့ အင်း တယ့် ....ကျနော့် ကို အ၀တ်တွေ တစ်ခု စီ ချွတ်ပေး တာ ပေါ့ ဗျာ ကျနော် က ရေညှစ် လိုက်လှမ်း လိုက်ပေါ့ .... ပီး တော့ သူ့ အတွင်းခံ ပဲ ကျန်တော့ တယ် ကျနော်က ချွတ်လေ ဆို တော့ အင်တင်တင် နဲ့ ပေး ပါ အတင်း တောင်းတော့ မှ သူ က ချွတ်ပေး တယ် .....အဲဒါနဲ့ အကုန် လုံး သူ ချွတ်ပီး သွား တော့ ကျနော် လည်း ချွတ်တာပေါ့ ....... အတွင်းခံ လေး ပဲ ချန် ပီး စောင်အောက် ထဲ ၀င်တော့ သူ့  ကျတော့ မချွတ်ဘူး တယ့် သူများတော့ အကုန်ချွတ်ခိုင်း တ်ယ တယ့် ပြောရော ကျနော် လည်း သူ့ စိတ်တိုင်း ကျ အဟီး ချွတ်ပေး လိုက်ပါတယ်...ခင်ဗျား တို့ ပဲ စဉ်းစားကြည့်ဗျာ အရမ်း ချော တယ့် ကောင်မလေး နဲ့ စောင်အောက် မှာ ကိုယ်လုံးတီး နေရင် ဘယ်လို နေမလဲ ဆို တာ ...ဟီး ဟီး ကျနော့်မှာ ဒုက္ခေ၇ာ သုခ ရော ရောက်နေတာ များ မပြောပါနဲ့ ဘယ်လို စ ရင် ကောင်း မလဲ စဉ်း စား နေတာ တော်တော်ကြာတယ် ......သူ က တော့ ကျနော့် ဘက် မျက်နှာလေး လှည့်ပီး ကြည့်နေတာ ပေါ့ ..ကျနော်က ဆေးလိပ် သောက်လိုက်စဉ်းစား လိုက် လုပ် နေတာ ...သူ က ဘာတွေ တွေးနေလဲ တယ့် အကြာကြီး ပဲ တယ့် .....ကျနော်လည်းမထူး ပါဘူးကွာ ဆို ပီး ဘယ်လို ဖက် ရင် ကောင်းမလဲ စဉ်းစားနေတာ လို့ ဆို တော့ သူ ရီ ရော ....ပီး တော့ မပြောမဆို နဲ့ ကျနော့ ကို လာဖက်တယ် .....ပီးတော့ နမ်း ပါလေ ရောကျနော်လည်းနမ်း တာပေါ့ ပီး တော့ လက်နဲ့ သူ့ နို့ လေး တွေ ကို ကိုင်တော့ သူ ကဘာပြောလဲ ဆို တော့ ...... ညာဘက်ကို ပဲ ကိုင်တယ့် ..... ဘယ်ဘက်ကို မကိုင် နဲ့ တယ့် .......အမ် .....ဘာဖြစ်လို့ လဲ ဆို တော့ အမေ က ကျောင်းတက်ပီး ပြန်လာ ရင် ဘယ်ဘက်ကို ကိုင်ကြည့်တယ် တယ့် အပျိုလေး လို တင်း နေမှ သူ က ယုံ တာ တယ့် ... အဟီး ဖြစ်ပုံ များ ပြောပါတယ်......ကျနော် လည်း သူ့ သဘောအတိုင်း ညာဘက်ကို တော့ သဘောရှိကလောဟိ ပေါ့ ဗျာ........အကုန်လုပ်တာ ...........ပီးတော့ သူ့ ညီမလေး ဆီကို အသာလေး လက်ကို ဆင်းသွားတော့ သူ က လက်ကို ဖမ်းကိုင်လိုက်ပီး တေဇ တယ့် သူ့ ကို ချစ်လား တယ့် မချစ်ပဲ နဲ့ သက်သက်တော့ သူ့  ကို ဘာမှ မလုပ်ပါနဲ့ တယ့် .......... ကျနော် လည်း ခြွေ ရတာပေါ့ ချစ်လို့ ပေါ့ မချစ်ပဲ နဲ့ မကြံစည် ရဲပါဘူး ပေါ့ ဘာညာ လုပ်တော့ သူ က ခွင့်ပြု ရော ကျနော် က အသာလေး ဆင်းသွား တော့........ အောက် မှာ အမွေး လေး တွေ က သိပ် မရှိဘူး ဗျ ကျနော်လည်း သေချာ ကြည့်ပီး လက် နဲ့ ပွတ်ပေးတော့ အသံ လေး ကို ထွက်နေတာ ပဲ ......နောက်ပီး အရည်လေး လည်း တဖြည်းဖြည်း ထွက်လာ တယ် ကျနော်က လည်း နို့ စို့ လိုက် လက် နဲ့ ပွတ်ပေး လိုက်လုပ်နေတာ တော်တော် ကြာတော့ သူ လည်း အသံ ကို ထွက်လာရော အရည် ဆို တာ လည်း တော်တော်ကို ထွက်နေပီ ဗျာ အဲဒါ နဲ့ ကျနော်က အောက်နဲနဲ ဆင်း ပီး တော့ လက်ကို ဆွဲထုတ် လိုက် တယ် ပီး တော့ သူ့ အပေါ် ကို ခွ လိုက် ရော သူ က တော့ ကျနော့် ကို ကြည့်ပီး ရှက်နေပုံ ပဲ ထင်တာ ပြော ပါတယ်.........ပီးတော့ ညီလေး ကို သူ့ ညီမလေး နဲ့ တေ့ ပေးပီး တော့ လေချွန်ခိုင်းလိုက်တယ် ဗျာ ....... တစ်ဘွတ်ဘွတ် တစ်စွပ်စွပ် နဲ့ ပေါ့ လေချွန် သံ ထွက်နေတာ များ ဟီး ဟီး .....အရက်တန် ခိုး နဲ့ နှစ်ဆ တိုး ပီး ကျနော် လည်း တွယ် တာ ပေါ့ သူက လည်း ခံ ပါတယ် .....သည်းညည်း ပြောပါတယ်.......... သည်းညည်းခံ တယ် ပြောတယ် ကျနော် က ဘယ်လို နေဆို သူ က နေပေး တယ် .........ဟဲ ဟဲ ဟဲ ........နောက် ကျတော့ ကျနော် လည်း မရတော့ဘူး ဗျာ .....တော်တော် ကို ကောင်းလာ တော့ သူ့ ကို ကို ပီး တော့ မယ် လို့ ပြောတော့ သူ က အပြင်ကိုထုတ်ပီး ပီး လိုက်နော် တယ့် သူလည်း ပီး သွား တယ် ပြောပါတယ် နောက် ကျတော့ ကျနော် မေး တော့ (စကား ချပ်) ကျနော်လည်းရုတ်တရက်တော့ ကြောင်သွားတယ် သူ သိနေတယ်ပေါ့ ....နောက်မှ အော် ဘာဖြစ်လဲ ကွာဆို ပီး အပြင် မှာ ပီး လိုက်တယ် ......အဲဒါ ကို သူ က ရိပ်မိပုံ ပဲ ဗျ ကျနော် ရေဆေး တော့ သူ က လည်း လိုက်လာ တယ် ရေဆေး ပေးလိုက်တယ်ပေါ့ ဗျာ ကျနော်က ရေပါ ချိုးပေးလိုက်သေးတယ် အဟီး ၀ါသနာ က ပြင် မရ ဆိုသလို မချိုးပေးပဲ ကို မနေနိုင်တာ ......ပီးတော့ ကုတင် ပေါ် လည်း ရောက်ရော သူ က မေး ပါလေ ရော သူ့ ကို တယ့် စောန က ဘယ်လို ဖြစ်လို့ မျက်နှာပျက်သွား တာ လဲ တယ့် ......ကျနော်က ......လည်း ဘာမှ မဟုတ်ဘူးပေါ့ ...ပြောတော့ သူ က သူသိပါတယ် တယ့် ......... အပြင်မှာ ပီး ခိုင်း လို့ မဟုတ်လား တယ့် ဟုတ်တယ် လို့ ဘာလို့ သိနေတာ လည်း သိချင်တယ်လို့ ပြောလိုက်တယ် ပွင့်ပွင့်လင်း လင်း ပေါ့ဗျာ ....ဒါမှ ပျော်စရာကောင်းတယ့်ဆက်ဆံ မှု့ မျိုးကို ရမှာကိုး ......... (အကြံပေးခြင်း) အဟီး .........သူ ကေ ပြာပြပါတယ် သူ ဆယ်တန်း တုန်း က သူ့ ဘဲ နဲ့ သူ နဲ့ ဒီလို မျိုးဖြစ်ဘူး တယ့် အကြောင်း သူ့  ဘဲ နဲ့ သူ နဲ့ ပြတ်သွား ပီးနောက်ပိုင်း သူ ယောကျာင်္းတွေ ကို မယုံတယ့် အကြောင်း ချစ်တယ်ပြောပီး တော့ နောက်ဆုံးတော့ ဒီဘူတာ ကို ပဲ မျက်စောင်း ထိုးတယ့် အကြောင်း .......အဲဒါကြောင့် သူ ယောကျာင်္းတွေ ကို တွဲ နေတာ ပေါ့ ဒါပေမယ့် သူ တစ်ယောက်နဲ့ မှ မငြိစွမ်းသေး ပါဘူး တယ့် .......ကျနော့် ကို တော့ သူ အစ က တည်း ကမြင်ဘူးပါတယ် တယ့် ........ ကျနော် က အေးဆေး တယ့် ပုံ ပေါက်တယ် ပီး တော့ ရှင်းရှင်းပြောရရင် ဖွန်လည်းမကြောင်ဘူး ပေါ့ ဗျာ...(သူ့ အထင်ကိုး..သူမှ မသိတာ အဟီး ).......ခု ကျနော် ပါလာတော့ သူ ပျော်သွားတယ်တယ့် .....အဲဒါကြောင့် ကျနော် လိုချင်တာ ကို သူ က ပေးလိုက်တာပါတယ် ...သူ က ချစ်နေတာ တယ့် ....ဟိုက် တေဇ တို့ တော့ ကံကောင်းချင်တော့ နတ်ပြည်ရောက်ပီပေါ့ ...ဟဲ ဟဲ ...ဒါနဲ့ ကျနော် က အော်ကိုလည်း ချစ်တယ် ပေါ့ ဘာညာ ပြောလိုက်တယ် .......သူ က သူအရင်က ဖြစ်ခဲ့တာတွေ ကို နားလည်ပေး နိုင် ရဲ့လား တယ့် ....ကျနော် ကလည်း ပြောရတာပေါ့ ......ဘာမှမဖြစ်ပါဘူး လို့ ကို နဲ့ ပတ်သက်တယ့် အချိန်မှာ သာ အဲလို မျိုး ငြိစွမ်း မှု့ မျိုးကို ကို လုံးဝ လက်မခံ တက်ဘူး လို့ အရင်က ဖြစ်တာ ကို ဗွေမယူပါဘူး ပေါ့ .....ဟဲဟဲ ဟုတ်တယ် မဟုတ်လား ဒီလို ပဲ ပြောရမှာလေ.............သူက လည်း ကျနော့် ကို ကျေးဇူးတင် ပို ပီး ချစ် ကျနော် ကလည်း အသစ် အဆန်း လေး ရတယ့် ကလေး တစ်ယောက်လို လိုချင်တာ ကို ခဏ ခဏ တောင်း နဲ့ သူနဲ့ ကျနော် အဆင်ပြေနေတာ ပေါ့ ........ ဒါပေမယ့် တစ်ခါတစ်လေ တော့ ရွာတော့ လည်ပီလို့ ...... ပပ နဲ့ စုစု နဲ့ ကို ဘယ်လို တွေ့ ရမလဲ ဆို တာ ကို ကျနော် တော်တော်ဦးနှောက်ခြောက်ရပါတယ်....တစ်ခုရှိတာ က စုစု က လကုန် စာမေးပွဲဖြေ ပီး ရင် ပြန် ရမှာလေ တစ်နှစ် မှာ နှစ်လလောက်လာ ရမယ့်သူ နဲ့ တစ်နှစ်လုံး ရှိနေမယ့်သူ မတွေ့ အောင်တော့ငါလုပ်နိုင် ပါတယ် ဆို ပီး စိတ်တင်းလိုက်တယ် ပီး တော့ ပျော်ပျော် ကြီး နေလိုက်တယ်ပေါ့ ဗျာ ...ဖြစ်သမျှအကြောင်း အကောင်းကြီး ပဲ မဟုတ်လား ....ဟဲ ဟဲ ......နောက်ပိုင်း တွေ မှာတော့ ပပ နဲ့ ဇာတ်လမ်း ကို ခဏ ရပ်ထား ပီး တော့ စုစု နဲ့ ပဲ တော်တော် ကို ပျော်ရွှင် ခဲ့ ပါတယ်.....အဲတုန်း က တော့ စုစု ကို တောင် တနေ့ ကျရင် ငါယူ မယ်လို့ တွေး ဖူး တယ် ဗျ...သူ က သူ့ ရဲ့ ပြစ်ချက်တော့ လည်း မဟုတ်ပါဘူး အရင် ကဇာတ်လမ်း ကို ကျနော် က သိထား တော့ သူ က ကျနော့် ကို အရမ်း ကို အလို လိုက်တယ် ဗျာ ......အဲဒါလေး ကို ကျနော်က တော်တော်ကို သဘောကျတာ .........ပပ ကလည်း နားလည်ပေးတယ် သူ တစ်ချို့ ကိစ္စ တွေ ကို သိထား တယ် အဲဒါတော့ ကျနော် နောက် မှပြန်သိတာပါ......အဲကိစ္စ တွေ ကို တော့ နောက် ရက်များမှ ပေါ့ ဗျာ.....ခုတော့ သွားစရာလေး ရှိလို့ ဂိုးလိုက်ဦး မယ် စုစု နဲ့ ပပ ရဲ့ နှစ်ယောက်ကြားမှာ အခက်အခဲ လေး တွေ ကို ရေးပြပါဦး မယ် ဆောင်တော်ကူးခန်း ပေါ့ ဗျာ.
တစ်ဟိုတယ် တည်း မှာ နောက် ကျရင် သိ ရလိမ့် မယ် ကျနော့် ရဲ့ ဟိုးရှေးရှေးတုန်း က ဇာတ်လမ်း အရှုပ်လေး တွေ ပေါ့ ........ဟီး
“ ကိုယ့်နာမည် ဇွဲမာန်ပါ .. အများကတော့ ဖွဲလို့ခေါ်တယ် ..”
ဟန်ဝင်းအောင် သည် မျက်နှာဖုံးစွပ်လေးအောက်မှာ ရှိနေမဲ့ ရုပ်သွင်ကို မြင်လိုက်ရတော့ သူ့မျက်နှာလေးဟာ ဆွဲ ဆောင်မှုရှိလွန်းသမို့ ပါးစပ်လေးပင် ပွင့်သွားရသည်အထိ အံ့သြသွားရသည် ။ အသားလေးက ဖြူသည်လည်းမဟုတ် တစ်မျိုးလေး ဝင်းဖန့်ဖန့်နဲ့ ရယ် ..
“ ဟေး .. အသက်လေးဘာလေးရှုပါဦးဗျ .. ကိုယ့်ကိုဘာကြောင့်သည်လောက်ငေးကြည့်နေရတာလဲ ..”
အသိဝင်လာသလို တံတွေးကို အနိုင်နိုင်မျိုချလိုက်ရင်း ..
“ မင်း .. မင်း အရမ်းချောတာပဲကွာ ..”
“ ဟား ... ဟား .. ဟား ..ဟား ..”
ဇွဲမာန်ရဲ့သဘောကျသလိုရီသံက ခြံထဲတွင်လွင့်ပျံသွားသည် ။ ပီး ဟန်ဝင်းအောင်ကို ရွှန်းရွှန်းစားစားကြည့်လိုက်ရင်း ..
“ ငါကလည်း မင်းကို အရမ်းချောတဲ့ကောင်ဆိုပီး စိတ်ဝင်စားနေတာပါကွ .. မင်းကလည်း ငါ့ကို အရမ်းချော တယ်တဲ့ .. ရီရတယ်နော် ..”
အိုး .. သူ့ရဲ့လွတ်လပ်ပွင့်လင်းပုံလေးက တစ်မျိုးရှက်စရာ .. ဟန်ဝင်းအောင်သူ့မျက်နှာကိုပင်ရဲရဲမကြည့်ရဲ တော့ ဘယ်လိုလူမှန်းမသိပါဘူး .. မျက်စောင်းလေးပင်ထိုးများထိုးလိုက်မိလားမသိ .. ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အခုအချိန်လေးမှာ စိတ်ထဲ ကြည်နူးနေသည် ။ လောကကြီးကိုဘာမှမမြင် ..
“ လာ .. ဒါဆိုရင်လည်းပြန်ကြမယ်လေ .. မပြန်ချင်သေးဘူးလား ..”
“ ပြန်တာပေါ့ .. ဒါပေမဲ့ .. ဟို .. ဟိုလေ .. ငါ သေးပေါက်ချင်လို့ ..”
ဟုတ်ပါသည် ။ ဟန်ဝင်းအောင်စိတ်ထဲ ဆီးသွားချင်နေသည် ။ ဖွဲမာန်က မျက်ခုံးကိုအတွန့်ချိုးလိုက်ရင်း ..
“ အောင့်ထားလေကွာ .. အထဲဝင်ရင် မင်းဟိုလူနဲ့တွေ့ဦးမယ် .. “
စဉ်းစားသလိုလို ဟန်ဝင်းအောင်မျက်လုံးလေးကလယ်ကလယ် ဖြစ်သွားသည် ။ ဟုတ်သားပဲ .အထဲပြန်ဝင်လို့ကတော့ ကိုဒီယံနဲ့ဆုံကိုဆုံမှာ ..
“ မင်း အရမ်းဆီးအောင့်နေလား .. အခံရခက်နေလား ဟင် ..”
ဖွဲမာန်မျက်လုံးများက စိုးရိမ်သလိုလို .. ပီးတော့ ဘေးဘီကို တစ်ချက်ကြည့်လိုက်ပီး .. ဟန်ဝင်းအောင်ရဲ့လက်ကို ဆွဲကာ ပုဏ္ဏရိပ်ပင်လေးဘက်ဆွဲခေါ်သွားပီး
“ ရော့  သေးပေါက်ချင်တာ အဆန်းမလုပ်နဲ့ .. သည်မှာရပ်ပေါက် .. “
သူ့ကို ကလေးတစ်ဦးကို သေးတယ်သည့်နှယ် ..
“ အွန် .. ရပါ့မလား .. သူများခြံဝင်းကြီးထဲမှာ .. တော်ကြာ တစ်ယောက်ယောက်မြင်သွားရင် ..”
“ အာကွာ .. မင်းတော်တော် နဂျီကျတဲ့ကောင်ပဲ .. ယောက်ျားလေးပဲ ...ပေါက်မှာသာပေါက်စမ်းပါ ..”
ဟန်ဝင်းအောင် သည် ပုဏ္ဏရိပ်ပင်လေးနားကပ်သွားပီး ဟိုကြည့်သည်ကြည့်လုပ်သည် ။ ပီးဘောင်းဘီဇစ်ကို ဆွဲဖြုတ်လိုက်ကာ သေးကိုပေါက်ချလိုက်သည် ။ ဇွဲမာန်က မျက်နှာကို တစ်ဘက်သို့လွှဲထားလိုက်ပါသည် ။
“ ဘယ်လိုလဲ စိတ်ထဲပေါ့သွားတယ်မလား ..”
ခြံအပြင်ရောက်တော့ Taxi တစ်စီး ရပ်စောင့်နေတာတွေ့၍ မေးကြည့်တော့ လူလာစောင့်တာတဲ့ .. သူတို့ကိုလိုက် ပို့နိုင်မလားမေးတော့ ရပါတယ်တဲ့ .. ဗိုလ်တထောင်ဘက်ဆိုတော့သိပ်ဝေးလှသည်လည်းမဟုတ်ဘူးလေ ..
Taxi နောက်ခန်းမှာ ၂ ယေက်အတူယှဉ်တွဲထိုင်ဖြစ်ကြသည် ။
သည်လို သည်လို ချောတဲ့ မင်းနဲ့ငါ သည်လို ဆုံရလိမ့်မယ်လို့မထင်ဘူးကွာ .. ဟန်ဝင်းအောင် စိတ်ထဲ ရေရွှတ်လိုက်မိ သည် ။ သူ့စိတ်ထဲပျော်နေသည် ။ အခုလို ဇွဲမာန်နဲ့ ဆုံရတာ .. အခုလည်း သူ့နောက်ကိုလိုက်ခဲ့မယ်တဲ့ .. စိတ်ထဲ အလိုလိုရွှင်မြုးနေသည် ။ ဘာရယ်လို့မဟုတ် သူ့လက်တစ်ဖက်က ဇွဲမာန်ရဲ့လက်လေး တစ်ဘက်ကို ဆုပ်ကိုင်လိုက် တော့ ရှေ့ဆီသို့ တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်လေး စိုက်ကြည့်နေတဲ့ သူ့မျက်နှာက ပုံစံမပြောင်း .. သူ .. ဟန်ဝင်းအောင် လက်ကို ရုန်းလည်းမရုန်း .. သူဘာမှမဖြစ်သလို ..
ခနကြာတော့ ဇွဲမာန်ရဲ့လက်လေးကလည်း ဟန်ဝင်းအောင်ရဲ့လက်ကို သာသာလေးပွတ်သပ်ပေးနေသည် ။ တစ်ချက်တစ်ချက်ဆုပ်ပီးဖျစ်ညှစ်လိုက်သေးသည် ။
ဟန်ဝင်းအောင်ကိုယ်လုံးလေးကိုနည်းနည်းလျောလိုက်ပီး သူ့ပခုံးပေါ်ဝယ်ခေါင်းလေးမှေးတင်ကာမှေးနေလိုက် တော့ ဇွဲမာန်ကလည်း သူ့ခေါင်းလေးကို ပြန်မှေးတင်လိုက်သည် ။ အို .. အခုလိုအချိန်လေး ဟာ သာယာလို်က်တာ .. သာယာလိုက်တာ ..
သည်လိုလေးသာ တသက်လုံး နေလိုက်ချင်ပါတယ် .. တကယ် .. တကယ် ..
ဟန်ဝင်းအောင်စိတ်ထဲအေးချမ်းလွန်းသည်မို့ မျက်စိလေးကိုပင်မှေးမှိတ်ထားလိုက်သည် ။
“ ဘယ်နားမှာဆင်းမှာလဲကွဲ့ ..”
Taxi မောင်းသူဦးလေးကြီးမေးလိုက်မှ အသိကပြန်ဝင်သွားသည် ။ မျက်လုံးများကိုဖွင့်ပီးခေါင်းထောင်ကြည့်လိုက်တော့